भगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पा’ल्न सक्ने हिम्मत राख्छ – iNews16
भगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पा’ल्न सक्ने हिम्मत राख्छ
छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?
तर हाम्रो समाज छोरीलाई अझैपनी हेला अनि तिरस्कार गर्ने गरिन्छ । पुरातनवादी सोच अनि पुरुष प्रधान देश भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कि कहिलेबाट चै छोराछोरी बिच समान ब्यवहार गरिन्छ?
कुनैपनी घरमा शान्ति सुन्दर अनि संस्कारिक हुन अवश्य पनि छोरीको आवश्यकता पर्दछ । छोरी बिनाको कुनै अस्तित्व हुदैन : जस्तै चाडबाड पनि छोरी नभए शुन्य प्राय हुन्छ ।
विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्ने छ ।
Previous एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन्छ
Next भ्याक्सिन बनाउनेलाई पो’र्न स्टारको सम्बन्ध राख्ने अफर